Google mar hore ayuu ku bilaabay hawlgelinta IETF QUIC iyo HTTP / 3 ee ku jira Chrome | Laga soo bilaabo Linux
Google mar hore ayuu ku bilaabay hawlgelinta IETF QUIC iyo HTTP / 3 ee Chrome
Google ayaa ku dhawaaqay dhawr maalmood ka hor ayay durba ku bilaabatay geynta HTTP / 3 iyo IETF QUIC ee Chrome iyo ogeysiiska, wuxuu sheegayaa inuu rajaynayo cusbooneysiintan inay soo qaadato waxqabadyo dheeri ah oo dheeri ah, gaar ahaan taageerada QUIC.
QUIC waa borotokool cusub oo gaadiid shabakadeed ah kaas oo isku daraya astaamaha TCP, TLS iyo inbadan. HTTP / 3 waa noocii ugu dambeeyay ee HTTP, borotokoolka xambaara inta badan taraafikada webka. HTTP / 3 kaliya waxay ku shaqeysaa QUIC.
Hawsha Injineernimada Internetka, ama IETF, waxay soo bandhigtay HTTP / 2 sanadkii 2015, mid ka mid ah horumarada waaweyn ee ay sameysayna waa taageerida isku dhufashada badan.
Si kastaba ha noqotee, waxay u isticmaashay TCP sidii maamuuska gaadiidka iyo farsamooyinka soo kabashada luminta ee TCP, sidaa darteed baakado lumay ayaa wali sababi kara dib u dhac ku yimaada dhammaan macaamilada firfircoon.
Qaadashada QUIC, HTTP / 3 waxay sii wanaajin kartaa habka wareejinta.
Xaqiiqdii, QUIC waxaa asal ahaan soo saaray Google oo markii ugu horreysay lagu dhawaaqay 2013. Tan iyo xilligaas, borotokoolku waayeelnimo ayuu yimid oo hadda wuxuu mas'uul ka yahay qaadashada saddex meelood meel ka mid ah taraafikada Google.
Kadib, sanadkii 2015, horumarka QUIC wuxuu u gudbay gacmaha IETF, heerarka jirka mas'uulka ka ah dayactirka borotokoolka internetka. IETF waxay ku wanaajisay QUIC dhowr isbeddel. Ilaa maanta, waxaa jira laba maamuus oo isku mid ah laakiin kala duwan, kuwaas oo kala ah: Google QUIC iyo IETF QUIC.
Google waxay ku dhawaaqday inay had iyo jeer isticmaasho noockeeda QUIC, laakiin in kooxdiisa QUIC ay sidoo kale ku lug leedahay hirgelinta nooca lahaanshaha ee IEFT. "Waxaan sameynay dadaallo muhiim ah oo aan ku horumarinayno Google QUIC shantii sano ee la soo dhaafay si aan ula socono isbadalada ay sameysay IETF, qaabka hada ugu dambeeyay ee Google QUIC wuxuu la mid yahay IETF QUIC," ayaa lagu soo qoray barta Google. marka lagu daro, cadeeyay in waxyaabaha qaar wali maqan yihiin.
Tusaale ahaan, illaa iyo hadda inta badan isticmaaleyaasha Chrome lama xiriiri karaan server-yada IETF QUIC adigoon awood u siin qaar ka mid ah xulashooyinka xariiqda taliska. Sidoo kale, Google waxay intaa ku dartay inay hadda ogaatay in IETF QUIC ay si weyn uga fiicantahay HTTP marka la barbar dhigo TLS 1.3 marka loo barbar dhigo TCP.
Gaar ahaan, shirkaddu waxay sheegtay in daahitaanka mishiinka raadinta Google uu hoos u dhacay in ka badan 2%. Waqtiga kaydinta ee YouTube-ka ayaa la dhimay in ka badan 9%. Intaa waxaa sii dheer, waxqabadka macmiilku wuxuu ku kordhay in ka badan 3% kombiyuutarada desktop-ka.
Taleefannada gacanta, waxqabadka macaamiisha ayaa kordhay in ka badan 7%. Sababahan iyo kuwo kale ayaa ka dambeeya u wareejinta Chrome ee qaabka QUIC ee IETF. “Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in Chrome ay hirgelinayso taageerada IETF QUIC (gaar ahaan, nooca tijaabada ah ee h3-29).
Maanta, qiyaastii 25% dadka isticmaala nooca xasilloon ee Chrome waxay adeegsanayaan h3-29, waxaanan qorsheyneynaa inaan kordhinno lambarkan toddobaadyada soo socda annagoo sii wadayna kormeerka xogta waxqabadka, ”ayay shirkaddu ku tiri barteeda.
"Chrome wuxuu si firfircoon u taageeri doonaa IETF QUIC h3-29 iyo midka Google QUIC (Q050) si waqti loogu helo server-yada taageera Q050 si ay ugu gudbaan IETF QUIC," ayuu raaciyay. Chrome m85 wali ma taageerto IETF QUIC 0-RTT oo Google waxay rajeyneysaa in waxqabadkani xitaa ka sii fiicnaado markuu sii daayo taageerada IETF QUIC 0-RTT bilaha soo socda. Intaas waxaa sii dheer, maadaama noocyada IETF QUIC ee 30 iyo 31 aysan kujirin isbeddelo jabin kara iswaafajinta, shirkaddu ma qorsheyneyso inay beddesho aqoonsiga "siligga badan".
Tan macnaheedu waa ayaa sii wadi doona la socoshada isbeddelada nooca IETF, laakiin ah u hirgelin doonaa sida h3-29 / 0xff00001d.
Sidaa darteed, waxay kugula talineysaa in server-yada ay sii wadaan taageerada h3-29 illaa iyo inta RFC-yada ugu dambeeya la dhammaystirayo haddii ay doonayaan inay dhexgalaan Chrome. Si kastaba ha noqotee, haddii IETF ay sameyso isbeddello jebinaya u-hoggaansanaanta mashruuc mustaqbalka, Chrome ayaa ka noqon doonta go'aankaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Google mar hore ayuu ku bilaabay hawlgelinta IETF QUIC iyo HTTP / 3 ee Chrome
Wallabag: Codsi is-martigelin oo furan oo furan si loo badbaadiyo bogagga internetka
La wareegida 2aad ee QAAD ee EnterpriseDB waxay bulshada u noqon kartaa khatar